HORDHAC: Chelsea Vs Man United-Xusuusta Finalkii Xili Ciyaareedkii Hore, Shaxaha Macquulka Ah, Dhaawacyada Iyo Waxa Kala Qabsan Doona Sarri & Solskjaer. - GOOL24.NET
HORDHAC: Chelsea Vs Man United-Xusuusta Finalkii Xili Ciyaareedkii Hore, Shaxaha Macquulka Ah, Dhaawacyada Iyo Waxa Kala Qabsan Doona Sarri & Solskjaer.
Kooxaha Manchester United iyo Chelsea ayaa caawa fooda isku dari doona Stamford Bridge waxayna wada ciyaari doonaan kulanka wareega shanaad ee FA Cupka iyada oo dagaal loogu jiro u soo bixitaanka wareega siddeed dhamaadka tartankan. Chelsea iyo Man United midkii soo baxa ayaa wareegan kula biiri doona Man City oo haddaba tikidhkeeda sii goosatay.
Kulanka Stamford Bridge waxa uu ku celis u yahay finalkii xili ciyaareedkii hore ee isla tartanka FA Cupka markaas oo ay Chelsea guul ka gaadhay Man United kadib markii uu Phil Jones qalad rekoodhe keenay ku galay Eden Hazard iyada oo xidiga reer Belgium uu ahaa ciyaartoygii Man United guuldarada badaay ee Blues koobkan u horseeday.
Manchester United ayaa rekoodh aad u liita ku soo lahayd kulamadii ay martida ku soo ahayd Stamford Bridge waxayna Red Devils soo guulaysatay LABA kulan oo kaliya kadib markii ay 22 kii kulan ee ugu danbeeyay Chelsea ku booqatay Stamford Bridge.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa mari doona imtixaan kale kadib guuldaradiisii ugu horaysay ee PSG kaga soo gaadhay Old Trafford wuxuuna isku dayi doonaa in uu xal u raadiyo fashilkii Man United ka soo haysan jiray kulamada martida ee Chelsea.
Kulanka Chelsea iyo Manchester United ee FA Cupka ayaa ka mid noqday kulamada helay baahinta tooska ah waxaana si toos ah kulankan u baahin doona BBC One, waxaana marka ay ciyaarta Cheslea iyo Man United soo dhamaato markiiba la samayn doonaa isku aadka wareega siddeed dhamaadka ee FA Cupka.
Manchester United iyo Chelsea ayaa iskaga hor iman doona kulankii 14 aad ee FA Cupka iyada oo Bues soo gudubtay mid kasta oo ka mid ah afartii jeer ee ugu danbeeyay oo uu ka mid yahay finalkii xili ciyaareedkii hore ay United ku garaaceen Wembley Stadium.
Manchester United ayaa soo guuldaraysatay saddex ka mid ah shantii kulan ee FA Cupka ay Stamford Bridge martida ugu soo noqotay Chelsea waxayna soo guulaysatay laba jeer oo kaliya oo kala ahaa 1997-98 (5-3) iyo 1998-99 (2-0).
Tababarayaal badan ayaa hore ugu soo xifiltamay Man United iyo Chelsea waxaana kulankoodii ugu horeeyay iskaga hor iman doona Maurizio Sarri iyo Ole Gunnar Solskjaer oo ay labadooda kooxoodba guul si wayn ugu baahan yihiin kadib dhibaatooyinkii ka soo gaadhay Man City iyo PSG.
Kooxda martida loo yahay ee Chelsea ayaan qabin wax walwal dhaawacyo cusub ah laakiin waxaa xili danbe la hubin doonaa taam ahaanshaha xidiga khadka dhexe ee Ruben Loftus-Cheek kaas oo uu ku soo laabtay dhaawicii dhabarka ka soo gaadhay.
Marcos Alsonso ayay suurtogal tahay in uu soo laaban doono isla markaana uu shaxda Sarri ku soo bixi doono wuxuuna Sarri haystaa koox uu shaxdiisa ugu fiican ka soo xulan karo.
Dhinaca Manchester United waxaa kulankan ka maqnaan doona Jesse Lingard iyo Anthony Martial oo labadaba dhaawacyo looga saaray kulankii PSG ee Champions League waxaana la filayaa in ay sidoo kale seegi doonaan kulanka Liverpool halka ay dagaal u gali doonaan haddii ay kulanka PSG ee lugta labaad ee Champions League ay taam u noqon karaan.
Waxa kale oo liiska ciyaartoyda Man United ee London soo gaadhay ka maqan Phil Jones Antonio Valencia, Marcos Rojo iyo Matteo Darmian.
Laakiin waxaa liiskan ku soo baxay Diogo Dalot, Scott McTominay, xidiga aan Solskjaer fursada ka helin ee Fred si la mid ah Perreira,Thith Chong iyo goolhayaha saddexaad ee Lee Grant.
Tartanka: Wareega Shanaad ee FA Cupka
Waqtiga: 10:30 Habeenimo Ee Saacada Geeska Afrika
Liiska Ciyaartoyda Man United Ee Axadii Shalay London U Safray:
Goolhaye: David De Gea, Sergio Romero, Lee Grant
Difaaca: Diogo Dalot, Ashley Young, Chris Smalling, Luke Shaw, Victor Lindelof, Eric Bailly
Dhexda: Nemanja Matic, Pereira, Scott McTominay, Fred, Paul Pogba, Ander Herrera
Weerarka: Romelu Lukaku, Tahith Chong, Marcus Rashford, Alexis Sanchez, Juan Mata
Shaxaha Macquulka Ah Ee Cheslea Vs Man United:
Man United XI: Sergio Romero, Ashley Young, Chris Smalling, Phil Jones, Luka Shaw, Nemanja Matic, Ander Herrera, Pual Pogba, Juan Mata, Marcus Rashford, Romelu Lukaku
Chelsea XI: Kepa Arrizabalaga, Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, David Luiz, Marcos Alonso, Jorginho, N’Golo Kante, Ross Barkley, Pedro Rodriguez, Eden Hazard, Gonzalo Higuain